5 egwuregwu bọọlụ mara mma nke mara mma maka gam akporo | Androidsis
Ọtụtụ egwuregwu vidiyo na -agafe n'aka anyị kwa izu ma ụfọdụ n'ime ha na -apụta kpochapụwo egwuregwu egwuregwu na -adị ndụ site na ngwaọrụ mkpanaka ebe enwere ọtụtụ nde ndị egwuregwu nwere olile anya ịlaghachi na mmetụta ochie nke oge gara aga mgbe njikwa joystick na nnukwu bọtịnụ ndị ahụ nyere anyị ohere ịhapụ mgbapụ na ọkpọ aka ekpe na aka nri. Site na ụlọ ahịa Android anyị nwere ụdị ha dị iche iche ma ọ na -esiri ike mgbe ụfọdụ ịghara ịnwa ọnwụnwa site n'ịzụta otu, ebe ọ bụ na ọ bụghị ha niile nweere onwe ha. Nke kachasị mma bụ na ha ka nwere mmụọ ahụ na egwuregwu ahụ nke na -aga n'ihu na -agba ọtụtụ.
Maka nke a, anyị ga -enyocha nyocha ahụ egwuregwu vidiyo arcade kacha mma 5 nke anyị nwere ugbu a na ụlọ ahịa Google Play. Ha niile mara ha, mana itinye ha na ndepụta nke ihe ịma aka ise anyị ga -enye anyị onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ nzuzu nwere egwuregwu dị mma nke ga -eburu ndị ahịa ya ngwa ngwa o kwere mee, ụmụnna ndị ahụ lụrụ ọgụ dịka onweghị onye nọ n'okporo ụzọ iji nwetaghachi ha. ma ọ bụ ụgbọ mmiri ahụ nke ọ na -aga na mbara igwe dị iche iche ebe ụdị ihe niile dị ndụ na -eyi ndụ ya egwu.
2 Metal slogu 3
4 Ugboro abụọ dragọn Trilogy
5 Crazy tagzi City Rush
Anyị nọ n'ihu otu nke egwuregwu kacha ewu ewu afọ niile na etinyeghị ya na ndepụta ise a bụ mmehie bụ isi. Ịdị mfe nke egwuregwu ya na mmụọ ndị ahụ ga -anwa iwepụ ha ghọrọ nrọ ma ọ bụ nrọ nke ndị gụrụ ya afọ iri ole na ole gara aga.
Egwuregwu vidiyo nwere na -enweghị ntụpọ n'oge nakwa na ọ na -aga n'ihu na -etinye uche ọha na eze maka egwuregwu nkịtị. Ị mara, na -eri ibe ma ọ bụ ọgwụ ndị ahụ iji kwụsị ọkwa ahụ tupu mmụọ nke ntụgharị emechi ya ụzọ ndị ahụ iji mechaa kwụsị ndụ ya.
Ị nwere Namco n'onwe ya nwere ọnọdụ kpochapụwo nke ga -eweghachite ụfọdụ ncheta na -atọ ụtọ. A na -enweta ya n'efu na ụlọ ahịa Google Play.
Developer: Ụlọ ọrụ BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.
Metal slogu 3
Anyị ahụla n'ime ọnwa ndị na -adịbeghị anya itinye mgbakwunye ụlọ elu mpụta ya Mwakpo Ọkpụkpụ Metal, ka ị ghara inwe ike tufuo oge iji cheta nnukwu Metal Slug 3. Arcade kpochapụwo 'em elu na nlele eserese mara mma nke pikselụ na -ewere ọnọdụ.
Ọdụ ụgbọ mmiri emere na ụlọ ahịa Google Play zuru oke, ọ ga -eburu gị otu sensations karịa igwe egwuregwu. Otu n'ime egwuregwu ịgba egwu dị egwu nke anyị nwere ike ịnweta mkpọsa otu onye ọkpụkpọ dịka ụdịdị ama ama dị ka Arcade ma ọ bụ Mission.
Ngwongwo metal 3
R-Ụdị kacha mma n'ọdụ ụgbọ mmiri a maka gam akporo. A arụ ọrụ nke ọma ọ fọrọ nke nta ka ọ nwee ike ịme nnukwu ọkụ azụ wee si otu a cheta afọ ndị ọzọ. Otu egwuregwu kacha mma n'ụdị a na agbanyeghị na oge ya agafeela, o nwere ikike ịnwale ugboro ugboro iji zere imehie ahụ nke mere ka e merie gị.
Otu njirimara ya kacha mma bụ ike ndị ọzọ anyị na -enweta ka anyị nwee ike ịgba ọkụ dị elu ma kpochapụ ndị iro n'ụzọ dị mfe. Ọ nwere njikwa mmetụ aka ọfụma yana ọ bụ otu n'ime arcades kachasị mma ị nwere ike iwunye na gam akporo gị site na nke igwe arcade. Ya € 1,99 bara ezigbo uru.
Ugboro abụọ dragọn Trilogy
Ụmụnne abụọ ahụ ga -ahụ maka iduga gị n'ime usoro ọmụmụ ama ama ama na oge niile n'ime ihe egwuregwu ntụmadị na ụkwụ ụkwụ ha ga -enyere gị aka ịbụ ndị nwe okporo ụzọ. Egwuregwu obodo mepere emepe nke na -aga n'ihu na ụdị nke pixelated nke nyere ya ohere ilekwasị anya ọtụtụ ndị bịara na arcades ndị ahụ.
Nchịkọta a gụnyere Dragọn Ugboro abụọ, Dragọn Ugboro abụọ: Nbọgwara, na Dragọn Ugboro Abụọ 2: Nkume Rosetta. Ị nwere egwuregwu egwuregwu abụọ maka arcade na -efu € 2,99 na nke ahụ nwere ọtụtụ awa ị ga -anụ ụtọ nke ukwuu.
Crazy tagzi City Rush
Otu n'ime igwe arcade kacha egwuri egwu yabụ ụdị eserese enweghị atụ na maka ijuputa ihuenyo na ọtụtụ agba. Ị ga -akpọrịrị ndị ahịa ngwa ngwa o kwere omume gaa ebe ị na -aga wee nwee ike were karịa ka ị nweta akara karịa.
Ihe na -atọ ọchị bụ ka esi edozi tagzi ahụ ka ọ were ntakịrị ara na ịkwa iko banye n'okporo ụzọ. onye ahịa dara ogbenye, gịnị ka ị na -ewere?, onye naanị rịọrọ maka ebe ọ ga -aga; ọbụghị na ị ga -eburu ya n'ụgbọ ala nke ụgbọ ala gị na n'okporo ụzọ ị ga -eme aghọọla. Ọ dị n'efu, n'agbanyeghị na ọ nwere ụdị akwụ ụgwọ.
Crazy tagzi ™ Obodo Rush
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » 5 egwuregwu kacha mma maka gam akporo